တော်တော်တူတယ်ဗျာ - MYSTERY ZILLION
October 2008 edited October 2008 in PHP
MZ နဲ့ တော်တော်တူတာပဲ ....
ရီရတယ် ရီရတယ် ရီရတယ်
How did you find it friend? :106:
Anyway, design is not important. Reality is reality.
Sharing our knowledge is major aim.
Long Live MZ :41:
vBulletin သုံးတာချင်းတူတော့ Template တွေက တူကောင်းတူပါလိမ့်မယ်။
Design ကတော့ vbulletin သုံးတဲ့လူတွေက တူကြမှာပါ... အထဲက တည်ဆောက်ဆွေးနွေးပုံတွေက မတူဘူးလေ.. emo လည်း vbulletin ကို ဝယ်သုံးပြီး တင်ရင် ဒီလို design ပဲရမှာပေါ့... ကျွန်တော် တို့ design အတွက် skins ထပ်ဝယ်မလားဆိုတဲ့ ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ရှိသေးတယ်
ဟားဟားဟား ဟီးဟီးဟီး ဟူးဟူးဟူး ဗြဲဟဲဟဲဟဲ ရယ်ရတယ်ဆိုလို့ရယ်လိုက်ရတာအူတောင်နာတယ်။ :d
Rapidshare ကို Hack ကြမယ်
RS direct download
အသံပြောင်း အသံလွဲလုပ်ချင်လား။ ရော့ယူလိုက်။
AV voice changer (latest)
Memory stick ကို RAM အနေဖြင့် သုံးချင်သလား
နှလုံးရောဂါရှိသူများ လုံးဝ လုံးဝ မကြည့်ရ။
အစ်ကိုကြီးရေ ..နဲနဲလျှော့ပါဦးဗျို့ ...များလိုက်တဲ့ Signature..ခေါင်းကိုမူးသွားတာပဲ:D:D
တကယ်အောက်မေ ့လို ့